तेस्रो विश्वयुद्धको संकेतः रुसका हतियारसहितका जंगी जहाज सिरियातर्फ बढ्दै, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
तेस्रो विश्वयुद्धको संकेतः रुसका हतियारसहितका जंगी जहाज सिरियातर्फ बढ्दै
एजेन्सी। के सिरिया संकटका कारण तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा उत्पन्न हुन सक्छ ? यो प्रश्न यसकारण उठ्न थालेको छ किनकि सिरियामा कैयौं देशको गुटबन्दी निकै हिंस्रक भइरहेको छ । अमेरिका र उसका सहयोगी देशहरुले सिरियामाथि रासायनिक हतियारको प्रयोग गरेको आरोप लगाइरहँदा सिरिया, रुस र इरानले भने अमेरिकी कारवाहीको निन्दा गरेका छन् । पछिल्लो समय केही मिडिया रिपोर्टमा भनिएको छ – रुसका युद्धक जहाज सिरियातर्फ बढ्दैछन् ।
डेली मेलको रिपोर्टअनुसार आइतबार सिरिया जाने बाटोमा २ रुसी लडाकू जहाज हातहतियार र मिलिट्री गाडीका साथ देखिएका छन् । यी गाडीहरुका ट्यांक, आर्मी ट्रक र हतियारले सुसज्जित मोटरबोटहरु छन् । एउटा जहाजलाई टर्की नजिकै बास्फोरसमा देखियो । जहाजको फोटो बास्फोरसका एक समुद्री पर्यपेक्षकले ट्वीटरमा पोस्ट गरेका थिए । यसरी रुसी हतियारधारी जहाज सिरियातर्फ बढ्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
रुसले सिरियामा आक्रमण गर्ने देशविरुद्ध जवाफी आक्रमणका लागि यी हतियार सिरिया पठाइरहेको अनुमान गरिएको छ । स्मरणीय छयसरी रुसी हतियारधारी जहाज सिरियातर्फ बढ्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । रुसले सिरियामा आक्रमण गर्ने देशविरुद्ध जवाफी आक्रमणका लागि यी हतियार सिरिया पठाइरहेको अनुमान गरिएको छ । स्मरणीय छ सिरियालाई रुसले समर्थन गर्दै आइरहेको छ ।